I-China Air Filter Regulator ifektri kanye nabakhiqizi | Morc
Ama-valve we-MC-22 ochungechunge wokulekelela okucindezela imishini yokucindezela amukela umgomo wokulawula ophambili futhi unengcindezi ephezulu yokulawula ukunemba. Zingahlunga izinhlayiya eziqinile ezingaphezu kwama-5 micron.
Ama-valve we-MC-22 ochungechunge wokulekelela okucindezela imishini yokucindezela amukela umgomo wokulawula ophambili futhi unengcindezi ephezulu yokulawula ukunemba. Zingahlunga izinhlayiya eziqinile ezingaphezu kwama-5 micron. Zilungele ukucindezela kokulawula nokuhlunga komoya ocindezelwe futhi zinikeze umthombo womoya ohlanzekile wemishini yokwemukela umoya.
Isakhiwo esinamakhompiyutha nokubukeka okuhle.
Igobolondo lenziwa nge-aluminium e-die-cast, kanti ingaphezulu limbozwe nge-polyester, enamandla okumelana nokugqwala. Insimbi engenasici engu-316 ingakhethwa imvelo eqinile yokugqwala.
Ukuqina okuphezulu kokukhipha, impendulo ebucayi, ayithinteki ngokushintshwa kwengcindezi yokungena nokugeleza kwesilinganiso.
Ububanzi obuncane bezinhlayiya eziqinile ezihlungiwe ngama-microns ayi-5, futhi linomsebenzi wokuzihlanza.
Izitolo ezintathu zenzelwe ukusiza abasebenzisi ukulungisa indlela yokufaka.
Kukhona umshini wokukhuculula indle phansi, futhi imodi yokukhuculula indle noma yokuzenzakalelayo iyakhethwa.
Imikhiqizo yethusi evinjelwe ingakhethwa.
Ukucindezela Kokufaka Okukhulu
Ububanzi Bokucindezela Kwemphumela
Ukunemba Okuncane Kokuhlunga
I-NPT1 / 4 、 G1 / 4
I-die-cast Aluminium Alloy
Imikhiqizo yethu isetshenziswe kabanzi ku-petroleum, amakhemikhali, amandla kagesi, i-metallurgy, insimbi, ukwelashwa kwamanzi, i-bio-pharmaceutical, ukwenziwa kwamaphepha, izitolo zokudla, ezempi neminye imikhakha.
Esedlule: Khawulela Ukushintsha
Olandelayo: Isicimi sikagesi
Isilawuli Sokuhlunga Umoya NgeGauge
Isilawuli Somoya Nesihlungi
Isihlungi se-Air Filter MC-22 Auto Drain